नाम नभनौं, केही बैंकहरुले अन्धाधुन्ध काम गरेको अवस्था छ - नाम नभनौं, केही बैंकहरुले अन्धाधुन्ध काम गरेको अवस्था छ
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले दिए एसईईको शुभकामना | रोल्पाका ८४ बालबालिकालाई पुनःमिलन | प्रहरीले समात्यो बौद्धबाट सात जुवाडे | कारागारका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण | बुहारीलाई फेसबुक चलाउन बन्देज
नाम नभनौं, केही बैंकहरुले अन्धाधुन्ध काम गरेको अवस्था छ
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ९ पुष, 02:23:56 PM
संस्थागत निक्षेपकर्ताको चलखेलले ब्याजदर बढाबढमा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा शुरु भएको हो
उपेन्द्र पौड्याल, नामै काफी छ अर्थात नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुपरिचित नाम । बिगत ३३ बर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा क्रियाशिल पौड्याल ग्लोबल एलायन्स फर ब्याङकिङ्ग अन भ्यालुजका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक पनि छन् । मुल्यमा आधारित बैंकिङको अवधारणा बोकेको यो संस्थाको प्रधान कार्यालय नेदरल्याण्डमा छ । गैह्रनाफामुलक यो संस्थाले लघुबित्त, दिगो आर्थिक विकास, सामाजिक एवं वातावरणीय विकासतर्फ आफ्नो विश्वव्यापी संञ्जालमार्फत काम गदै आएको छ । हाल नेबिल बैंक तथा नेपाल बैंकिङ ईन्स्टिच्युटका डाईरेक्टरसमेत रहेका पौड्यालले बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका छन् । स्पष्ट विचार र कार्यशैलीका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अलग्गै पहिचान बनाउन सफल उनले गतबर्ष मात्र एनएमबी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट अवकाश लिएका थिए । पौड्यालकै नेतृत्वमा गतवर्ष ग्लोबल एलाएन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुजको नेपाल सम्मेलन भएको थियो । वरिष्ठ बैंकर पौड्याल नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन । उनै पौड्यालसँग नेपालबहस डटकमले नेपालको वर्तमान तरलता अभाव, सरकार र राष्ट्र बैंकको भूमिका एवं बैंकिङ क्षेत्रको समग्र अवस्थाका बारे लामो संवाद गरेको थियो । प्रस्तुत छ , उनीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :
Senior Banker Upendra Poudyal
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हरेकवर्ष तरलता अभाव सिर्जित भैरहेको छ । यसो हुनुमा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय वा बैंकिङ क्षेत्र को दोषी हो ? साथै हरेकबर्ष दोहोरिनुको खास कारण के हो ?
समग्रमा एउटा मात्र कारण छैन, धेरै कारण छन् । यो समस्या यसपटक पनि दोहोरिन्छ भन्ने कुरा अवश्यंभावी थियो । हाम्रो वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्दा जम्मा ३ प्रतिशत निर्यात र ९७ प्रतिशत आयातमा निर्भर छ । हामी उपभोग धेरै गरिरहेका छौ । आन्तरिक उत्पादन शुन्य प्रायः छ । दैनिकदेखि बिलासिताका उपभोग्य वस्तुहरु सबै आयात गरिरहेका छौं । त्यसले रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बाहिरिएको छ । हामीले हाम्रो उपभोग्य वस्तु आफैँ उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । अर्थतन्त्रको आकार दिनानुदिन बढिरहेको छ । विकास खर्च भइरहेको छैन् । राजनीतिक अस्थिरताको अर्को पाटो छ । जसका कारण साधारण खर्च बढिरहेको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च भइरहेको छ । टेलिभिजन, मोवाइल, घडी, कार–जीपजस्ता विलासिताका वस्तु किन्दा देशमा पैसा बसिरहेको छैन । नगद र एलसी कर्जाका रुपमा पैसा विदेशिएको छ । यसका कारण देशको अर्थतन्त्रमा पैसा चलायमान भएको देखिएतापनि समग्रमा व्यापारघाटा चुलिएको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर सरकार र राष्ट्र बैंकले समय मै आवश्यक नीतिनिर्माण गर्नु जरुरी थियो । बढीभन्दा बढी रेमिट्यान्स कसरी भित्रयाउने भन्नेतर्फ सरकारको सोच खोई ? आयातलाई कसरी रोक्ने तथा निर्यात कसरी बढाउने भन्ने कुरालाई सरकारले नै नीतिगत रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । आज नीति बनाएर आज नै त्यसको असर त देखिँदैन ।
सरकारले बिगतदेखि नै दूरगामी नीति लिएर काम नगरेको प्रष्ट छ । भारतलाई अहिले अत्याधिक उर्जा चाहिएको छ । हामीले धमाधम हाइड्रोपावर निमार्ण गरि विद्युत् निर्यात गर्न सकेको भए त्यसबाट ठुलो धनराशी भित्रने अवस्था थियो । सरकारले उधोगी-व्यापारीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका नीति निमार्णतर्फ ध्यान नै दिएन । उद्योगी-व्यापारीबाट बढीभन्दा बढी कर लिन्छु भन्दापनि पहिला तिनलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा सरकारी स्तरबाट सोच्नु पर्थ्यो । सरकार राजश्व उठाउने कुरामा मात्र केन्द्रित छ । तर त्यसलाई खर्च गर्न सक्दैन् । त्यो पैसा ढुकुटीमा जाम भएर बसेको छ । अहिलेपनि ३ खर्बभन्दा बढी राजश्व सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । त्यो राजश्व सिस्टममा आएन । यसले पनि तरलता समस्या सिर्जना गरेको छ ।
भनेपछि तरलता अभावको मुख्य दोषी सरकार नै हो ?
तरलता अभावको मुख्य दोषी सरकार नै हो । अर्कोतर्फ हाम्रो बैंकिङ प्रणाली पनि दोषी छ । बैंकरहरुलाई यो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने थाहा नभएको होइन । बैंकिङ प्रणालीमा पनि समस्या छ । बैंकरहरुले पनि अलि संयमित भएर लगानी गर्नुपर्ने थियो । सबै बैंकलाई म दोष दिन्न । तर केही बैंकले ऋण लगानीमा सोच नपुर्याइ काम गरे । कर्जा लगानीमा आक्रामक नभई आफ्नो स्रोतले धान्नसक्ने मात्र लगानी गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गरिदिएको भए तरलता समस्या यतिबिध्न हुने थिएन । अहिलेसम्म रेमिट्यान्सले धानेको मुलुक हो यो । नत्र अहिले हामी मगन्ते भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आइसक्थ्यो ।
राष्ट बैंकको फोर्सफुल पूँजीवृद्धि योजनाले पनि बैंकहरुलाई आफ्नो बिजनेश बढाउने र नाफा देखाउने बाध्यताले कर्जाप्रवाह अन्धाधुन्ध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको होईन र ? समस्या अलि जेलिएको हो कि ?
जेलिएको हो । प्रेसर सिर्जना पनि भएकै हो । त्यो वातावरण पहिल्यै तयार गर्नु हुदैनथ्यो । तर बाध्यता छ भन्दैमा यो अवस्थासम्म जानु उचित होइन । बैंक र वित्तिय प्रणालीको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो हाम्रो लागि, नाफा त्यसपछिमात्र हो । बैंकको नाफालाई थातीराखेर बैंकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । तर हामीले नाफालाई पहिलो बनायौँ । यो गलत अभ्यास थियो ।
बैंकका सिईओ र नेतृत्वको दूरदर्शी भिजन नभएकै हो त ?
प्रेसर धान्न सक्नुपर्थ्यो । तर धान्न सक्नु भएन । बैंक भनेको अरु विजनेश चलाएको जस्तो होइन । यो पब्लिक संस्था हो । जसलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको हुन्छ । बैंकको छुटै किसिमको जिम्मेवारी छ । तसर्थ अन्धाधुन्ध काम गर्नु हुदैन । नाम नभनौं, केही बैंकहरुले अन्धाधुन्ध काम गरेको अवस्था छ । हाम्रा बैंकिङ नीतिनियमहरु कुनै स्तरिय छन्, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा पनि कडा छन् भने कतिपय धेरै लचिलो पनि छन् । यसलाई ब्यालेन्समा ल्याएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
एकातिर बैंकिङ क्षेत्रमा हरेकबर्ष क्रेडिट क्रन्च आउने अर्कोतर्फ आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउने कुरा गर्नु भएको छ । के नेपालले तत्कालै निर्यात बढाउन सक्ने अवस्था छ त ? सरकारको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न उत्पादन बढाउनु पर्यो, निर्यात बढाउन पर्यो , त्यसका लागि पनि बैंकले लगानी बिस्तार नै गर्नुपर्ला ? अनि कर्जा बिस्तार नगरी सुख छ र ?
हामी क्षणिक सोचमा छौं । त्यही भएर दीर्घकालिन रुपमा सोच्नु जरुरी छ । गाडीको आयात गर्दा भन्सारकरमार्फत धरै राजश्व उठ्छ भनेर आयात मात्रै गर्न दिने त ? गाडीको आयातलाई सरकारले रोक्न सक्नुपर्थ्यो नि । त्यत्रा महंगा गाडीको आयात हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ त ? सरकारको दीर्घकालिन सोच खै त ? विलासी सामान खरिद गरेर राजश्व बढाउनेभन्दा पनि उत्पादनशील उद्योगमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्र्यो । सरकारले स्वदेशी उधोगमा कर सहुलियत दिएर हुन्छ कि वा अन्य वातावरण तयार गरेर हुन्छ । स्वदेशी उधोगलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनु जरुरी छ ।
तर सरकारमा व्यापारी हो त्यसलाई कर अनि भन्सारमा कस्नु पर्छ , राजश्व बढाउनु पर्छ भन्ने सोच हावी भयो । हाम्रा व्यापारीले भारत तथा चीनका व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । हाम्रो क्षमता कति हो त्यसलाई पहिचान गरेर हामीले हाम्रो उद्यम विकास गर्नुपर्छ । यही गाडी बनाउने वा सफ्वेयर विकास गर्ने सोच राख्नु फाइदाजनक होइन । हामो ध्यान त हामीसँग भएका पुराना मठमन्दिर भनौं जानकी मन्दिर, हिमाल, लुम्बिनी, पशुपतिनाथजस्ता सम्पदाको प्रचारप्रसार र पहिचानको चिनारीमा जानुपर्छ । हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको निर्माण र विस्तार गर्न सकेका छैनौ । पर्यटन र जलविद्युतको विकास गर्न सकेका छैनौ ।
भन्नुको मतलब हाम्रो ध्यान पर्यटन, जलबिद्युत, कृषि र पूवाधार विकासतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । तर एउटा प्रोजेक्ट के सुरु गरेका हुन्छौ त्यसमा दशवटा लफडा आइलाग्छ । एउटा बाइडबडी विमान खरिद गर्दा त यत्रो लफ्डा हुन्छ भने अब कसले जोखिम उठाउने ? अहिले रिक्स कसैले उठाउन नचाहने अनि कोही कसैले गर्न खोजेमा पनि धेरै झमेला आइपर्ने अवस्थाले गर्दा नै यो अवस्था आएको हो । काम गर्दा २/४ पैसा तलमाथि होला । मह काढ्नेले हात चाट्ने कुरा स्वभाविक नै होला । त्यो व्यक्तिको इमानदारिता र स्वाभिमानमा भरपर्ने कुरा हो तर कसैले राम्रो काम गर्न खोजेको छ भनेपनि विभिन्न हौवा खडा गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । कहिले काहीँ काम गर्दागर्दै पनि प्रक्रिया नपुग्न सक्छ । बटमलाइन के हो भन्ने बुझिदिनु पर्ने हो नि ।
विकास निमार्णका काम कुनैपनि बाहानामा रोकिनु भएन । बरु त्यसलाई कसरी पारदर्शी , व्यवस्थित र छिटोछरितो बनाउने हो भन्नेतर्फ राज्य संचालकहरुको ध्यान पुग्नुपर्यो । ग्रोथलाई असर नपर्ने गरी ऋण लगानी गर्न सकेको खण्डमा उत्पादन बढ्छ । यो कामका लागि समय लाग्न सक्छ । एकदुई बर्षको होइन कि १०/२० बर्षको दीर्घकालिन सोच राखेर सरकारले काम गर्नु पर्छ । सरकारले कर वृद्धि गर्ने र त्यो कर ढुकुटीमा जम्मा गर्दैमा केही हुँदैन । उधोग-कलकारखाना तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले तिनलाई सब्सिडी दिने, मोटिभेशन गर्ने तथा प्रोत्साहन दिनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ ।
अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । जहाँ अर्थतन्त्र बुझेका पूर्व गर्भनर नै अर्थमन्त्री छन् । सरकार त्यो दिशातिर गएको देख्नुहुन्छ ?
मैले त केहीपनि देख्दिन । सरकार आफ्नै आन्तरिक राजनीति तथा प्रक्रियागत समस्यामै अल्झेको छ । सरकार प्रक्रिया ,राजनीतिकवाद र प्रतिपक्षलाई गाली गर्न मै अल्झेको छ । अहिलेसम्म सबैले राम्रो कुरा गरेको देखिन्छ । तर जनचासोको समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सरकार प्रतिपक्षको प्रतिकार गर्न मै अड्किरहेको छ । जनतालाई आश्वासनको भारी बोकाउन मै व्यस्त देखिन्छ ।
संविधान आएर देशमा स्थायी सरकार गठन भयो भने अर्थतन्त्रले गति लिन्छ , निजी क्षेत्र बुष्टअप हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । तर दुर्भाग्य ! त्यो संकेतसम्म देखिएन, कारण के देख्नु हुन्छ ?
अलिकति त देखिएको छ । अहिले राजनीतिक गतिरोध अलिकति साम्य भएको अवस्था छ । हिजोका दिनमा भन्दा आजको दिनमा मान्छेहरुमा आत्मविश्वास बढेको अवस्था छ । पर्यटकको आगमन बढेको छ । हिजोको दिनमा ३/४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि आज ५ प्रतिशत भन्दामाथि छ । त्यसको प्रभाव केही हदसम्म देखिएको छ । तर हाम्रो देशलाई त्यतिले पुगेको छैन । अधिकांश समस्याहरु ज्युका त्युँ छन् । तरलता समस्या कै कुरा गर्दा म बैंकर्स संघमा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हुँदादेखि नै तरलता अभावका कारण पत्ता लगाउने र यसको समाधानका विषयमा बहस भएकै हो । दीर्घकालिन समाधान निकालौं भनेको सधैं अल्पकालिन समाधान मै हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । हाम्रो तथ्यांक पनि सही छैन् । जस्तो मार्केट फिगर सरप्लस छ, समस्या छैन भन्यो , तथ्यांक हेर्दापनि त्यस्तै देखिन्छ । अनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन योे नाटक गरेको भन्ने आरोप लाग्छ । जबकी असी प्रतिशतको सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै छ । कतिपयको ८० प्रतिशत सीमा नाघीसकेको छ, कतिपयको त्यही हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीसीडी रेसियोलाई कायम राख्नपनि व्याजदर परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
पूर्व गर्भनरले नै त्यस्तो आरोप लगाउनु भयो नि ?
नबुझ्या हो कि भनौं भने उहाँजस्तो मान्छेले बुझ्नु हुन्न भने मलाई भन्नु केही छैन । तर त्यो तथ्यांकले नै बोलिरहेको कुरा हो नि । तपाई/हामी सबैले देखिरहेको बिषय हो । तरलता समस्या त छ नै । मैलेपनि बैंक चलाएकै हो । मलाई रहर छैन कि ब्याजदर १३-१४ प्रतिशत पुर्याउ भन्ने । आजको दिनसम्मपनि राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर त तोकिदिएको छ । जतिसुकै गरेपनि स्प्रेडदर भित्रै बसेर काम गर्नुपर्छ । भनेपछि बैंकलाई ब्याजदर बढाउन के को रहर छ र ? कसरी बैंक संचालन भएको छ भन्ने कुरा त बुझिदिनु पर्यो ।
सरहरु बैंकर्स संघमा हुदाँ जे निर्णय गर्नुहुन्थ्यो त्यो हुबहु लागुहुन्थ्यो । तपाईहरु अडानमा बस्नु हुन्थ्यो । तर अहिले त कहिले भद्र सहमति गर्यो फेरि आफैले तोड्यो । भद्रगोल भएन र ? के अहिलेको नेतृत्व अनम्याच्युर भएका कारण बैंकर्स संघको नेतृत्व कमजोर भएको हो ?
म कसैलाई पनि दोष दिन चाहन्न । त्यो बेलाको समस्याको म्याग्निच्युड र अहिलेको समस्याको म्याग्निच्युड अलि बढी भो । बैंकहरुको पुँजीबृद्धिले कर्जाविस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्यो । अर्को अर्थतन्त्रको आकार नै बढेको छ । हिजोका दिनमा निर्यात ११ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेकोमा आज ३ प्रतिशतमा झरेको छ । आयात बढेको बढ्यै गर्ने तर निर्यात घट्दो क्रममा छ । समस्यालाई अझै बल्झाउने काम आयात र निर्यातले निर्धारण गरेको छ । बैंकरको कार्यदक्षताभन्दा पनि केही बैंकहरु बढी नै नाफामुखी भएका छन् । केही बैंकहरु नाफा बढाउने धुनमा एग्रेसिभ भएका कारणपनि बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको हो । केही बैंकमा समस्या भयो भन्दैमा डिपोजिट बढाउन ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धाले गर्दा समग्र वित्तिय प्रणालीमा नै समस्या देखापरेको हो । ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा ठूलो भुमिका सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाहरुको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप संस्थागत निक्षेपकर्ताको छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थागत निक्षेपकर्ताको चलखेलले ब्याजदर बढाबढमा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा शुरु भएको हो ।
सरकारले पहिला बिचौलिया प्रयोग गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो रकम चलखेल गर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । मौकाको गलत फाईदा उठाउन दिनु भएन । संस्थागत निक्षेपलाई सरकारी स्तरबाट नै समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नु आवश्यक छ । बैंकरले उत्तरदायी ढंगले बैंक चलाएजस्तै जनताको राजश्व उठाउने ठूला निक्षेपकर्ताले यसरी गलत काम गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । सरकारले तिनलाई चेक एण्ड व्यालेन्स गर्न आवश्यक छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका ठूला निक्षेपकर्तासँग भएको रकम राजश्वमार्फत नै आएको हो । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई सरकारले सीमा तोक्न जरुरी छ । उनीहरु नाफामुखी हुन सुहाउँदैन ।
भद्र सहमति तोडिएपछि व्याजदरमा बढोत्तरी भयो । वाणिज्य बैंकहरु विकास बैंक भन्दापनि कमजोर भएको अवस्था देखियो ? कतै ठूलो दुर्घटना त निम्तिदैन ?
बैंकिङ क्षेत्रमा त्यो अवस्था देख्दिन र आउँदैन तर सबै संयमित हुन जरुरी छ । विकास बैंकले कर्जाहरु विकेन्द्रीकरण गरेका छन् । साना तथा खुद्रा ऋणहरु लगानी गरेका छन् । धेरै बैंकहरुले अहिले साना तथा खुद्रा ऋणमा नै लगानी केन्द्रिकृत गरेको अवस्था छ । बैंकहरु सकारात्मक लगानीको अवस्थामा गईसकेका छन् । सबै बैंकहरु साना तथा लघु कर्जा लगानी गर्ने अवस्थामा जाँदा–जाँदै पनि तरलता अभावको समस्या आईरहेको छ । भनेपछि अर्थतन्त्रको संरचनामै समस्या छ । सरकारले यो कुरा जति चाडो बुझ्यो उति छिटो समस्या निराकरण हुन्छ ।
बित्त बजार र पूँजीबजार सुधारका लागि गठित सरकारी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला ?
सबै स्टेकहोल्डरको कुरालाई गम्भिरतापूर्वक सुन्नु जरुरी छ । नाफाघाटाको कुरा हेर्नु भएन । सरकारले मेरो गोरुको बाह्रैटक्का भन्नु भएन , उदार भएर सोच्नु पर्यो । विज्ञ समितिको सुझावलाई सरकारले यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।
तरलता अभावले उधोगी-व्यापारी मारमा, उपभोक्ता महंगीको भारमा पर्ने तर बैंकहरु चाहिँ नाफा मात्रै कमाउने ? बैंकहरु अर्बपति क्लबमा पुग्ने तर उधोगी/व्यापारीलाई डिफल्टर बनाउने ? बैंकले ३४ देखि ४० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने ? भनेपछि तरलता अभावले बैंकलाई त फाईदा नै पुगेको देखियो । बैंक सेवामुखी कि नाफामुखी ?
बैंक नाफामुखी मात्र होइन । चुक्तापूँजीको आधारमा लाभांश दिने हो । राम्रो आम्दानी गर्न सक्नेले धेरै लाभांश दिने हो । बजारमा भएका सबै संस्था खराब हुदैनन् । कति बैंकहरु पुराना छन् । उनीहरुले जनविश्वास जितेका छन् । चुक्तापुँजी ८ अर्ब भएका कम्पनीको शेयरको बजार मुल्य पूँजी बजारको हिसाबमा २० अर्बभन्दा माथि छ । शेयर होल्डर फण्ड अर्थात बुक भ्यालुको हिसाबले भन्ने हो भने त लाभांश अझै पुगेको छैन । ८ अर्बको चुक्तापुँजीमा १०० अर्ब जनताको निक्षेप लिएर काम गर्दा जोखिम छ नि । त्यसको स्थायित्वका लागिपनि बैंकरले सोच्नुपर्छ । भोलि अर्थतन्त्रमा तलमाथि हुनासाथ संस्था खत्तम हुन्छ । त्यसैको लागि २० प्रतिशतको व्याकअप चाहिएको हो ? राष्ट्र बैंकले जति नाफा कमाउँछौ त्यसको २० प्रतिशत चाहिँ बचाएर राख है भनेको छ । जस्तो नाकाबन्दी-भूकम्पका बेलामा यस्तै रिर्जभ वा नाफाले संस्थालाई बचाएको हो । नत्र त संस्था नै डुब्ने अवस्था आउँछ । बैंकले नाफा गरेको छ भन्दमौ कोही आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । यो पब्लिक संस्था हो । यसले कमाउने नाफामा पब्लिकको नै हक हुन्छ । अर्कोकुरा बैंकहरुको हिसाबकिताब पारदर्शी हुन्छ, अरुको के हुन्छ भन्न सकिदैन । अरु संस्थाको जस्तो तलमाथि गर्न यस्ता संस्थामा सम्भव छैन । निजी क्षेत्रका कतिपय संस्थाले देखाउने नाफामा पारदर्शिता नहुन सक्छ ।
संचालक समिति वा लगानीकर्ताको प्रेसरमा बैंकका सिईओलाई जसरी पनि नाफा कमाउनु पर्ने बाध्यताले ८ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको ब्याजदर एकाएक १६ प्रतिशत पुग्यो ? भनेपछि बैंककै कारणले डिफल्टर जन्माउने प्रवृत्ति हावी भो नि ? के बैंकले घाटा नै खान नहुने ?
त्यसको त मपनि बिरुद्धमा छु । कुन बैंकले के गरे कसो गरे भन्ने तिर नजानुस । बैंकको खाता पारदर्शी छन् । स्प्रेडदरका बारेमा राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा अनुगमन तथा निर्देशन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पारामिटरभित्र बैंकहरु छन् कि छैनन् भन्ने हेर्ने हो । केही बैंकहरु बढी नै नाफामुखी भएका हुनाले यदाकदा यस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । सानाभन्दा ठुला खालका बैंकहरुले केही हदसम्म चलखेल गर्ने हुन । यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । अहिलेको समय पहिलाको जस्तो छैन । यदाकदा बढी नै नाफा कमाउने भूतसवार भएका २/४ बैंकरको कुरालाई छोड्ने हो भने अहिले अधिकाशं बैंकको कार्यशैली गर्व गर्न लायक छ । बैंकिङ क्षेत्र अझ बढी व्यवस्थित, पारदर्शी , व्यवसायिक र जिम्मेवार हुदै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अहिलेको भुमिकालाई कसरी लिनु हन्छ ?
मुख्यकुरा सरकारले कसरी सिस्टममा पैसा दिने भन्ने हो । बजारमा तरलता अभाव भएको छ । सरकारले सिस्टममा पैसा दिँदापनि तरलता अभावको बढीमार खेपेका बैंकलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो । तर अहिले अधिक तरलता भएका बैंकहरुमा नै स्थानीय निकायको पैसा पुगेको छ । यसले त तरलतालाई कुनै सम्बोधन गदैन् र अर्कोकुरा तरलता अभाव खेपेका बैंकहरुलाई अन्तरबैंक कारोबारमा पनि सहज हुने अवस्था हुँदैन । सरकार वा राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा नै तरलता अभाव खेपेका संस्थाहरुमा रकम निकासा गर्न सक्नुपर्छ । रि–फाईनान्सिङ गर्ने वा क्राईसिसको अवस्थामा कसरी बैंकिङ च्यानलमा पैसा प्र्याउने भन्नेतर्फ सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्छ । बैंकहरु समस्यामा परेभने सरकार पनि समस्यामा पर्छ । अहिले भन्दा धेरै ठुलो समस्या आउन सक्छ । एकअर्कालाई दोषारोपण गनुभन्दा पनि बैंकहरु पनि अलि लचिलो भएर काम गर्ने र सरकार एवं राष्ट्र बैंकले पनि सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्यो । बैंकिङ च्यानलमा पैसा सिञ्चित गर्नु पर्यो । खालि मनिमार्केटमा पैसा दिएर मात्र भएन । त्यो त लगानी गर्न पाईदैन ।
अहिले विदेशी बैंकहरुसँग पनि साझेदार गरेर रकम भित्र्याउन सकिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछ । यस्ता समस्याहरु समयसमयमा रिकर भएर आएका छन् । त्यसैले यस्ता किसिमका फण्डहरु आईसकेपछि तथा विकास खर्च हुन थालेपछि लगानीले गति लिन थालिहाल्छ र आफै फण्ड जेनेरेट हुन थाल्छ । २/३ बर्षको होराईजनमा मार्केटलाई तरलता प्रवाह गर्ने कुरा सरकारले सोचिदिनु पर्यो । सरकारले समयसमयमा आउने तरलता अभावलाई समयमा नै दीर्घकालिन रुपमा सम्बोधन नगर्ने हो भने बैंकर र सरकारबीच विश्वासको वातावरण टुट्न सक्छ । सदावहार रुपमा आउने तरलता अभावले गर्दा बैंकहरु कर्जा लगानीमा खुम्चिनुपर्ने बाध्यता आईपर्छ । त्यसले त फेरि सरकारको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यलाई असर पार्ला ! राष्ट्रबैंकले खाली बैंकहरुलाई गाली मात्र गरेको सुन्छु । त्यसले त समस्या समाधान हुदैन होला । एकअर्काको समस्या बुझेर गाठो फुकाउनेतर्फ पो लाग्नु पर्यो । आज राष्ट्र बैंकले क्रेडिट एक्पान्सन १७/१८ प्रतिशत मात्र गर्नु भनेकोमा २०/२२ प्रतिशत पुग्यो होला । त्यसले कति नै फरक पर्छ र ? सरकारले आयातलाई रोक्न नसक्ने खाली कर्जा लगानी सिमाभन्दा बाहिर गयो भनेर मात्र त भएन नि । सरकारले बैंकलाई विभिन्न बाहानामा च्याप्ने मात्रै तर समस्या पर्दा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह नगर्नाले त समस्या बल्झँदै जान्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट सरकार र राष्ट्र बैंकलाई आएको दवाव बैंकरमाथि परेको हो ?
दवाव त पर्छ नै । तर हामी बिलासीजन्य उपभोग्य बस्तुको आयातलार्ई रोक्न नसक्ने अनि स्वदेश मै उत्पादन गरि निर्यात गर्नपनि नसक्ने । यसले त समस्या हुने नै भयो । पानीले आफ्नो सतह आफै निर्धारण गर्छ नै । मानिसले ऋण या सापट गरेर भएपनि उपभोगमा पैसा खर्च गर्छन् नै । त्यसैले अब उपभोगमा मात्र होइन निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । उत्पादनमुलक उधोगमा लगानी बढाउनु पर्छ । बैंकले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, सिमेन्ट कारखानामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । अहिले सिमेन्ट पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएको भए के हालत हुने थियो होला ? त्यसैले लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर सरकारले नीतिगत रुपमा नै पाईला चाल्न सक्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले त्यतातर्फ थोरैपनि ध्यान दिएको छैन । पर्यटन, जलबिद्युत र कृषि क्षेत्रले नै यो देशको कायापलट गर्छ । त्यतिमात्र होईन ,समग्र सेवाक्षेत्र जस्तै बैंक, बीमा, आईटी क्षेत्रमा सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । देशभित्र भएका यिनै ३/४ वटा क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न सकेको खण्डमा देशमा विकास हुन्छ । यी बाहेकका क्षेत्रमा सरकारले फोकस गरेर केही लछारपाटो लाग्दैन् ।
फ्रान्समा हेर्नुस् त, एउटा आइफेल टावर हेर्नका लागि संसारभरका मानिस ओईरिएका छन् किन ? भन्दाखेरी त्यहाँको पूवार्धार विकास । तर हामीले त केही पनि गरेनौ । उही पशुपतिनाथ बस्नु भा’छ । उहाँ पहिल्यदेखि नै बस्नु भा’कै हो । हेल्थ टुरिज्जमदेखि धार्मिक एवं पौराणिक महत्वका पशुपतिनाथ, लुम्विनी, संसारकै उच्चशिखर सगरमाथा हुँदापनि हामीले त्यसलाई नगदमा रुपान्तरण गर्न सकेका छैनौं । शिक्षा कै कुरा गर्दा पनि अवस्था भयावह छ । उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि नै प्रत्येक बर्ष देशको अरबौँ रुपैयाँ बाहिरिएको छ । हेल्थ र एजुकेशन सेक्टर स्लो–पोईजनको रुपमा गईरहेको छ । यसलाई रोक्ने सरकारी नीति खै ? यसमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । समग्र पक्षको विकास बिना देशको विकास सम्भव छैन ।
आज सरकारले अरुलाई दोष दिन मिल्छ ? खै पूवार्धार विकास ? निजगढ एयरपोर्टको कुरा विगत २० वर्षदेखि लट्काएर बसेका छौ । मैले बैंकिङ शुरु गर्दा आएको पश्चिम सेती विगत ३० वर्षदेखि थन्किएको छ । त्यसको दोषी बैंकर हो र ? जनता हो र ? यसको मुख्यदोषी त राजनीतिक पार्टी र सरकारी नेतृत्व नै हो । जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पदैन ? म राजनीतिकर्मी होइन । मलाई पोलिटिक्ससँग लेनादेना छैन् । हामीले यतिका ठूलो राजनीतिक परिर्वतन देख्न पायौँ । हामी आफु–आफु लडाई– झगडा गररे हिँड्ने अनि बैंकर , व्यापारी र जनतालाई दोष दिन पाईन्छ ?
आज काठमाडौं आउने वैकल्पिक विमानस्थल र राजमार्ग हामीले पाउन सकेका छैनौं । एयरपोर्टको स्तरोन्नति खै ? महानगरको हालत उस्तै खराब छ । आज आएर सरकारले कसैलाई दोष दिने नैतिक आधार नै छैन । विकासका पूर्वाधार निर्माण नगर्ने अनि अरुलाई दोषारोपण गरेर देश बन्छ ? पूर्वाधार विकास त सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारले पूर्वाधार विकास गरेको खण्डमा आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले नै देशको अर्थतन्त्र कायापलट गर्छन् ।
वर्तमान सरकारले जथाभावी करवृद्धि गर्यो भनेर चौतर्फी बिरोध भईरहेको छ । करबृद्धिका कारणपनि तरलता अभाव सिर्जना भएको हो र ?
करबृद्धिका कारण त होईन । तर चाहेपनि नचाहेपनि हामी संघीय संरचनामा गईसक्यौ । राज्य संचालनका लागि पैसा त सबैलाई चाहियो । हिजो २२/२५ जनाको मन्त्रिमण्डल थियो भने आज ७ प्रदेशमा विभाजन भएपछि १४० जनाको मन्त्रिपरिषद भयो । त्यो संयन्त्र चलाउन त पर्यो । सातैवटा प्रदेश चलाउन जनप्रतिनिधिहरु आएका छन् । उनीहरुलाई तलब–भत्तादेखि प्रशासनिक खर्च त दिनु नै प¥यो । खर्च त बढेको छ । पोलिटिकल सिस्टम नै गलत तरिकाले निर्देशित भयो । संयन्त्र नै स्वच्छ भएन । सरकारको दीर्घकालिन सोच भएन । आजभन्दा ३० वर्ष अघिनै हामीसँग अर्को कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्थ्यो, ठूला जलविद्युत आयोजना बनेका हुन्थे र काठमाडौं जोड्ने नाकाहरु पmराकिला र विकल्पसहितका हुन्थे भने आज यस्तो आर्थिक नाजुकताको अवस्था त आउने थिएन । यो कुरा नेताहरुले नबुझेका पनि होइन ? नेताहरुमा इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भएन । फेरि नेताहरुलाई निर्देशित गर्ने कर्मचारीतन्त्र हो । ‘म तिम्रो मान्छे-तिमी मेरो मान्छे’ भनेपछि कसरी काम हुन्छ ?
२०७५, ९ पुष, 02:23:56 PM
सिटिजन्स बैंकको कोर बैंकिङ्ग अब फिनाक्कलबाट
विदेशबाट फर्केका युवाले १० लाख ऋण पाउछन् त ?
शनिबार पनि बैंक खोल्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको पनि ब्याजदर घट्यो
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले दिए एसईईको शुभकामना
रोल्पाका ८४ बालबालिकालाई पुनःमिलन
प्रहरीले समात्यो बौद्धबाट सात जुवाडे
कारागारका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण
नेपालको रेलसेवा सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो
आइतबारदेखि एसईई परीक्षासुरु, सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी प्रदेश नं ३ मा
सन्दर्भ : विश्व मौसम दिवस मौसमी घटना बढेको चिन्ता